क्षमता भएका यूवाहरुले नेतृत्व पाउनुपर्छः युुवा नेता राई::Leading News Portal From Nepal.
# गेन्द्र लामा
क्षमता भएका यूवाहरुले नेतृत्व पाउनुपर्छः युुवा नेता राई
पढेलेखेका यूवाहरु राजनीतिलाई फोहोरी खेलको रुपमा चित्रण गर्दै राजनीतिमा आउनै चाहदैनने । आफ्नो पढाई पश्चात कोही विदेसिन्छन् त कोही आफ्नै काम धन्दातिर लाग्छन । तर धरानका सागर राई पढाईपछि आफ्नै ठाउँ फर्के र सामाजिक काम गर्दै राजनीतिमा होमिए । अहिले उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’संग आबद्ध छन । उनै राईसंग समसामयिक युवा राजनीति विषयमा केटिएम खबरका लागि रवि भट्टराईले विशेष संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाई यूवा ब्यक्तित्व केमा ब्यस्त हुनुन्छ ?
मुलत म सामाजिक काममै ब्यस्त रहन्छु । राजनीतिक काम त खासै छैन भन्नु पर्छ । चुनाबताका अलि ब्यस्तै भईयो तर अहिले जनजिविकाको सामाजिक काममा ब्यस्त छुु ।
यहाँ जस्तो यूवा मान्छे राजनीतिमा सामेल हुँदै गर्दा कस्ता अप्ठ्याराहरु आउने गर्छन ?
राजनीति भन्ने वित्तिकै समाजले नेगेटिभ रुपमा हेर्ने गर्छ । त्यसै पनि हामी यूवा सक्रिय रुपमा राजनीतिमा लाग्दै गर्दा धेर थोर पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक अप्ठ्याराहरु आउनु स्वभाविकनै हो । तर हामी यूवाहरु नलागेसम्म परिवर्तन सम्भब छैन भन्ने लागेर सामाजिक कार्यहरुमा होमिएको हुँ ।
यूवाहरु राजनीतिमा विकर्षण भईरहेको अबस्थामा तपाई चाही कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
अहिलेको समाजको जुन किसिमको बनोट छ । यहा सरकारले वा कुनै नेताले यो गर्यो यो गरेन भन्दापनि मुलभुतरुपमा तल्लो स्तर देखिनै त्रुटीहरु छन । स्थानिय स्तरदेखिनै समस्याहरुछन र तेस्ता समस्याहरु हामी नलागे सम्म समाधान हुदैनन भन्ने एउटा पाटो हो । अर्को तर्फ राजनीतिक चेत हो । कसरी समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ त ? भन्ने चेतको कारणले नै म राजनीतिमा आकर्षित भएको हु जस्तो लाग्छ ।
राजनीतिमा लागेर केही पाईदैन भन्ने यूवाहरुको नैराश्यता छ ?, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?
समाजमा नेगेटिभ कुराहरु देखिएको छ । जस्तै भ्रष्टाचार, बेथिती, अराजकता जस्ता कुराहरुले यूवाहरु निराश हुनु स्वभाविक हो । तर यसलाई यत्तिकै छोड्ने त ? यो महत्वपुर्ण प्रश्न हो । यत्तिकै छोड्ने हो भने हामी नलाग्ने हो भने त परिवर्तन कसरी हुन्छ त ? त्यस कारण यसलाई चिर्नको लागि हामी जस्तो यूवा लाग्न जरुरी छ । फेरी भ्रष्टाचार भन्ने कुरा तत्काल उब्जिएको कुरा त हैन विगत लामो समयदेखि हुदै आयो र यसलाई निर्मुल पार्नको लागी हामी यूवाहरु तलदेखि नै जगरुक हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।
तपाई ठ्याक्कै भन्न सक्नु हुन्छ के कारणले यूवा राजनीतिमा विकर्षण हुदै छन् ?
त्यस्तो एकुरेट डाटा त म भन्न नसकौला तर म एक यूवा र मैले छातीमा हात राखेर भन्नु पर्दा देशको सामाजिक बनावट, बेथिती र भ्रष्टाचार, समाजमा घट्ने घटनाहरुको स्थिती देशको आर्थिक संरचनालाई नियाल्दा मलाई पनि रातमा निर्दा पर्दैन । हो यही चेतनाको कारण यूवाहरु पलायन भएका हुन सक्छन ।
देशका मुल प्रबाहमा रहेका राजनीतिक दलले यूवाहरुलाई किन आकर्षित गर्न सकिरेहेका छैनन् ?
समग्रमा भन्नु पर्दा विगत लामो समयबाट देशका केही राजनीतिज्ञहरु कुसँस्कारको सिकार भए जस्तो देखिन्छ । एक किसिमले राजनितिले समाजलाई डोर्याउनु पर्ने थियो तर अहिले चाहि राजनीतिक दलका नेताले कार्यकर्ता मात्र लिएर हिडेको जस्तो देखिएको छ । अहिले आएर झन भ्रष्टाचार र बेथितीले गाजेको छ । यसलाई समाधान गर्नको निमित्त एउटा ठुलै उथल–पुथल हुनु पर्छ र यो हुन्छ अनि मात्र यूवाहरु आकर्षित हुन्छन भन्ने लाग्छ ।
तपाई त गीत–संगित क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनु हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
हो म समाजिक कार्य गरेर बाकी रहेको समय यो क्षेत्रमा पनि छु ।
गीत संगितले समाजको चेत बदल्छ भनियो भने सत्य हुन्छ ?
पुर्ण रुपमा हैन तर केही हदसम्म कला साहित्य संगीतले सोचमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर पुर्ण रुपमा समाजको चेत बदल्नको लागि राजनीतिनै विकल्प हो । तर मैले सँस्कृतिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु ।
तपाईको पार्टी सत्तामा छ, अहिलेको राज्यसंग तपाई सन्तुष्ट हुनुन्छ ?
पुर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुने आधार अहिलेनै चाहीँ छैन । किन छैन भनेदेखि समाजमा बिभिन्न बेथितीहरु यथावत छन । मुलत मुलुक कता जान्छ भन्ने चासो आम यूवामा छ । र राजनीति स्थिर भए जस्तो छैन ।
यूवा पुस्तालाई राजनीतिक रुपमा माथी उठ्न दिईदैन भन्ने गरिन्छ यो कुरा साचोँ हो ?
हाम्रो सँस्कार यस्तो छ । तर क्षमता छ भने कसैले रोकेर र छेकेर छेकिनेवाला छैन र पनि रोक्न खोजिन्छ । यो समाजको बनावटनै त्यस्तै छ । र त्यसको प्रभाब धेर थोर पर्ने भई हाल्यो । हो समाजको संस्कारनै यस्तो भई रहेको छ । यूवालाई रोक्ने प्रयास गरिने कुरा सत्य हो । तर अबका दिनमा क्षमता भएका यूवाहरुले नेतृत्व पाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।
तपाई यूवाहरु चाहीँ पार्टी भित्र र बिभिन्न बैठकहरुमा कस्तो भुमिका खेल्दै आउनु भएको छ ?
मुलत यही नै हो । आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाउने र यूवाहरुलाई बढिभन्दा बढि स्पेस दिनु पर्छ भन्ने कुरानै हाम्रो रहन्छ ।
तपाई धरानलाई आधार बनाएर समाजिक कामहरु गर्नु हुन्छ, त्यहाका समस्याहरु के–के छन ?
भर्खर संघियताको अभ्यास भएकोले केही समस्याहरु हुनु स्वभाविक नै भयो । चुनाव पछी केहि आशा अपेक्षा थियो तर निराशा हुनु पर्ने नै त देखिदैन । तर सुरुवाती चरणमा खुशिनै हुनु पर्ने स्थिति छैन तर हुदै जाने छ आशा राखौ । धरानको सवालमा अन्य कुराहरु त सामान्य चलिनै रहन्छ तर त्यहा विपी हस्पिटलको बिवादले विरामीहरु अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका छन र अन्य आम समस्याहरु त छदैछन ।
अन्त्यमा के भन्नु हुन्छ ?
आम रुपमा मेरो ब्यक्तिगत कुरा भन्नु भन्दा पनि, ब्यक्तिगत रुपमा राजनीतिक प्लेटफर्म पाईएन भने पनि निराशा नभई सामाजिक कार्यमा लाग्दै समाज र राष्ट्रलाई केही योगदान दिन सम्पुर्ण यूवाहरुलाई आग्रह गर्दछु ।
समय र संवादको लागी धन्यबाद ।
यूवानेता सागर राईसंग गरिएको भिडियो कुराकानी तलको युटुब लिंकमा जानुहोस्ः
‘गिद्धहरु फूलतिर हेर्देनन्, सिनो मात्रै हेर्छन्’
‘एम टु एम’ शैक्षिक अवधारणामा ब्रुकलिनः अध्यक्ष खिला सापकोटा (भिडियो)
प्रेमा राईको शिक्षा मोहः १६ वर्षमा पढ्न सुरु गरेर हाल आफ्नै स्कूल सञ्चालन गरिरहेकी छिन् [अन्तरवार्ता]
लाइसियमको ‘खेलकुद सप्ताह’ सुरु (भिडियो)
शिक्षामा सुधार आवश्यक छः प्याब्सन उपत्यका प्रदेश प्रमुख थकिन कुमार गुरुङ
प्राक्सिसको ‘अभिभावक अभिमुखिकरण’ तालिम सम्पन्न (भिडियो)
‘काेराेनाकाे कहरका कारण काेही पनि नमराैँ, कसैलाई नमाराैँ: सबैले केही न केही याेगदान गराैँ’
थप १२ जनामा कोरोना पुष्टि
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन छोटे राजाहरू गाउँ–गाउँ गएका रहेछन्
नेपालमा कोरोनाबाट चौथो व्यक्तिको मृत्यु भएको पुष्टि
बुढानिलकण्ठ र टोखाका तिन ब्यक्तिमा कोरोना संक्रमण
नेसनल प्याव्सन काठमाडौंको विस्तारित बैठक अनलाइन मार्फत गरिने
निजी विद्यालयद्धारा सहुलियत माग
एकै दिन ५९ जनामा कोरोना संक्रमण, स‌ंक्रमितको स‌ं‌ख्या ५ सय नाध्यो
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा आरडिटी पोजेटिभ देखिनेको संख्या ३२ पुग्यो
डिजिटल बैंकिङ विस्तार नै अबको आवश्यकता हो